#Istanbul10 Mpiaro Ny Zon’Olombelona Tany Am-ponja Nandritra ny 100 Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Español, Français, عربي, Italiano, Ελληνικά, English
Mpikambana valon'ny #Istanbul10 izay mbola any am-ponja any Torkia.
12 Oktobra, manamarika ny 100 andro nitazonana ireo mpiaro ny zon'olombelona 10 any Torkia nandritra ny atrikasa fiofanana. Manomboka amin'ity herinandro ity, mety hiatrika famonjana hatramin'ny 10 taona ireo mpikambana amin'io vondrona io ankehitriny, noho ireo zavatra nataony nanohana ny fiarovana ny zon'olombelona.
Nifamory ny vondrona hanao atrikasa mikasika ny fitantanana ny loharanom-baovao ary mba haka aina tao amin'ny iray amin'ireo nosin'i Istanbul, Buyukada, ny 5 Jolay, raha nanafika ny atrikasa ny polisy, nisambotra ireo mpandray anjara, ary naka ireo fitaovana elektronika, tafiditra tamin'izany ireo solosaina sy ireo finday. Tao anatin'ireo voasambotra ny talen'ny Amnisty International Turquie, Idil Eser.
Voasambotra iray volana mialohan'io fanafihana io ny filohan'ny Amnesty International Turquie, Taner Kilic, ary nampangaina ho niray tsikombakomba tamin'ny lazaina fa “fikomiana” miaraka amin'ireo mpiaro ny zo miisa 10. Nampangaina ho nanampy “vondrona mpampihorohoro mitam-piadina” moa izy rehetra ireo hatreto, ary nomelohan'ny mpampanoa lalàna tamin'ity herinandro ity, izay mitady hampiditra am-ponja ny tsirairay am-polo taonany, araka ny vaovaom-panjakana Andalou.
Teratany Tiorka ireo rehetra niharan'ny fiampangàna, afa-tsy ireo mpanazatra Ali Gharavi, teratany Soedoà, sy Peter Steudtner, teratany Alemà.
Tsy namoaka porofo azo tsoahina mba hanohanana ireo fiampangàna ireo manampahefana, ary ny porofo nolazaina dia ahitàna rakitsary nalaina tao amin'ny solosainan'i Gharavi, misy sarin-taninà vondrona araky ny fiteny any Torkia, Iràka ary Iran, ary kisarisarin'ireo olona vita amin'ny hazo nataon'i Ozlem Dalkiran nandritra ny atrikasa, mpikambana iray hafa an'ny vondrona. Samy naneho tamin'ny asa an-taonany maro ny finiavany amin'ny fiarovana sy fananganana am-pilaminana ireo zon'olombelona tsy an-kanavaka any Torkia, ireo rehetra voatazona, araka ny voarakitr'ireo lalàna eo an-toerana sy ireo lalàna iombonana maneran-tany mikasika ny zon'olombelona.
Taorian'nyFollowing a court appearance on July 17, the detainees experienced a brief period of limbo in which some were released and then taken back into custody. Nejat Tastan and Seyhmuz Ozbekli are currently out on bail, but have been barred from travel beyond Turkey's borders, and must report to their supervision officers twice per week.